Munamato wekuropafadza chikafu. ? [uye chikafu kuna Mwari]
Munamato wekuropafadza chikafu Iyi itsika inoramba ichishanda kusvikira nhasi mumhuri dzese.
Icho chikamu chekudzidziswa kwevana uye chimwe chinhu icho kunyange muzvikoro chinoitwa sekudzidzisa.
Kukosha kwekuita munamato uyu kunowanikwa mukutenda, mukukoshesa chikafu chatinofanira kudya uye nekukumbira ivo vasina.
Iyo inyasha yekutenda kuna Mwari vanova vanotipa simba rekuenda kubasa, kunotenga chikafu, inotipa huchenjeri hwekuvagadzirira uye neropafadzo yekuve nemhuri yekuvagovana.
Mune zviitiko apo panenge pasina mhuri patafura, isu tinofanirwa kunge tichifanira kutenda nekuti kune vanhu vasingakwanise kudya, izvo zvisiri nekuti vasina asi nekuda kwekuti havagone nekuda kwezvikonzero zvehutano kana mamwe mamiriro ezvinhu, izvi zvinofanirwa kutiita kuti tinzwe kuonga uye mumwe Chimwe chezviito chinoratidza izvi kunamata munamato mudiki usati wadya.
1 Munamato wekuropafadza chikafu Iwo wakasimba here?
1.1 Munamato wekuropafadza chikafu
1.2 Munamato wekupa kuvonga chikafu
1.3 Munamato wekudya
2 Ndinofanira kunyengeterera minamato yese here?
Munamato wekuropafadza chikafu Iwo wakasimba here?
Minyengetero yose ine simba chero bedzi yaitwa kutenda musimba ravo.
Zvikomborero chikafu chiitiko chekutenda umo isu tisingatenderi chete asi ndokumbirawo chikafu chinyatsodonha mumuviri wedu, kubereka, kuitira kuti varege kumira kuve patafura yedu uye kutipa zvakanaka zvinovaka muviri izvo Uya nechimwe nechimwe chazvo.
Nesuwo tinokumbira kune avo vanoshaya uye vasina chekudya patafura yavo, ivo vanongodya zvidiki zvidiki zvekudya, isu tinokumbira kune avo vasingafanirwe kupa vana vavo, kune avo vane nzara uye vasina zviwanikwa zvekugutsa.
Munamato wekuropafadza chikafu nechikafu chakasimba sezvo paine kutenda.
Sezvauri kuona, haisiri kungopa kuvonga chikafu, chiito chekutenda uye rudo kune vamwe kwatinoisa pachedu munzvimbo yevamwe uye kubvunza zvavanoda.
Kana munamato ukaitwa uchiziva zvinodiwa neumwe uye tikakumbira kufanana kwedu isu tiri kuratidza rudo rwaMwari muhupenyu hwedu.
Ishe Mwari; media kuitira kuti muTafura iyi pane kusangana kwekudyidzana pakati pevaeni;
Murevereri wechikafu chamakatipa nhasi kuti chingova chemafuro chete;
Rega iye asati adya Edza muchero wechigadzirwa chako chakanaka.
Tinokudai, Mwari Baba, uye tinokutendai zvikuru nekugovana kwamunotipa nhasi.
Tinogona kutanga munamato nekupa kutenda nekuda kwemukana watinopihwa naMwari kuti tikwanise kuzviraramisa zvakanaka.
Ipapo tinogona kukumbira iye munhu atora dambudziko kugadzira chikafu kuitira kuti tikwanise kuchidya, kune iye akabatsira mukuita kwese kuti chikafu ichi chisvike patafura yedu.
Isu tinokumbira kune avo vasina uye tinokumbira chingwa chezuva nezuva kuti chiiswe mumaoko emunhu mumwe nemumwe uye, pakupedzisira, tinotenda zvakare chishamiso chehupenyu.
Munamato wekupa kuvonga chikafu
Baba vatsvene; nhasi tinokubvunza
Dai iwe ukabatana nesu patafura iyi uye nekuropafadza chingwa icho chaticharavira munguva diki; Zvinoreva kuti izvi ndizvo chibereko chehutano hwedu Uye usasiye iye zvino ari kunetseka kuwana kurumwa.
Tinokurumbidzai, imi Ishe, uye inyasha dzedu ipfupi kune Sei rombo redu kune izvi zvekudya!
Tiudze nezverudo rwako uye uvhenekese nzira inoenda kukamuri yako.
Kuonga isimba iro rinoratidzwa nevashoma nhasi, isu tinorarama munyika iri kuenda nekumhanyisa uye vashoma vanomira kuzopa kutenda.
Mushoko raMwari mune nyaya inotaura nyaya yevamwe maperembudzi avo Jesu akapa chishamiso chekuporesa uye mumwe chete akasara kuti avonge.
Nguva zhinji izvi zvinoitika muhupenyu hwedu.
Isu tine hanya chete nezvekudya, kuzvizadza isu asi kwete kupa kutenda uye ndicho chinhu chinofanira kuve chinodiwa muhupenyu hwedu.
Komborerai nhasi baba vandinoda, Kune vese vari patafura ino;
Komborerai iye akagadzira chikafu; Rumbidzai iye akavatendera kuti vave pano; Komborerai, nekuwedzera, iye uyo akarima imwe yeiyi.
Vatsvene baba! Kune iro rombo raunotipa nhasi, tinotenda zvikuru uye nehunyoro hushoma hwekunamata uye nekurumbidza nekuda kwechingwa chawakaisa patafura nhasi.
Muenzaniso wakanaka wekunamatira kwekudya unoonekwa munaJesu weNazareta iye amene akatenda nezvechikafu chavakadya.
Pane zvishamiso zvakamirira a munamato kuti tisvike kwatiri uye chishamiso chekudya chezuva nezuva chinogona kuva chimwe chazvo.
Munguva dzino dzinoratidzika kunge dzakaoma zvikuru kutenda kuburikidza nemunamato mukana wekuva nechikafu chatinoda chiitiko chekutenda nerudo rwaMwari.
Ndinofanira kunyengeterera minamato yese here?
Iwe chete unofanirwa kunamatira munamato wekuropafadza chikafu kamwechete pamberi pekudya kwekutanga. Chaunogona kuita kunamatira munyengetero wakasiyana pakudya kwese.
Inogona kusiyana zuva nezuva, vhiki kusvika vhiki kana kunyange mwedzi kusvika pamwedzi.
Gara uchiyeuka kuti chinhu chakakosha kuve nekutenda muna Mwari Tenzi wedu. Kutenda uye kutenda ndizvo hwaro hwemunamato chero upi zvawo.
Minyengetero ine simba kuti uwane nyasha uye uzadzise zvido zvako zvakadzama
Namata munamato kuti uwane mweya wemurume uye urarame nyaya yerudo
Dzidza munamato wekuregerera kwemweya